teny Mahamasina fa efa mihoatran’ny orinasa sy andrim-panjakana 10 ankehitriny (12 martsa 2018) efa nisoratra anarana fa handray anjara amin’ny hetsika tamin’ireo 60 isa nandefasana fanasana. Efa tomombana ny fikarakarana rehetra, hoy ity tale ity, amin’izao ora hifampiresahana izao fa ny datin’ny 21 sy 22 aprily hanatanterahana ny hetsika sisa handrasana. Marihana fa taranja 7 dia ny Foot à 7, Basket ball mixte, Volley ball mixte, Pétanque, Law tennis, Tennis de table ary Belote no handraisan’ireo mpifaninana anjara mandritra ireo roa andro ireo ka tsy mahazo mampilalao an’ireo « licencié » mihitsy ireo ekipa mandray anjara. Hisy ny lalao basikety s y volley natokana hoan’ireo andriambavilanitra. Ao Mahamasina daholo no hanatanterahina an’ireo lalao ireo ary ao ihany ko ny fisoratana anarana. Satria lanona hombam-bady aman-janaka ity hatao ity dia misy ny sakafo hamidy sahaza ny rehetra ao Mahamasina ao ary hisy koa toeram-pilalaovana hoan’ireo kilonga madinika.